Stirrups: Ny tantaran'izy ireo, iza no hofidiana, ary ny toerana mety amin'ny tongotra | Soavaly Noti
Stirrups: ny tantaran'izy ireo, iza no tokony hofidina sy ny toerana mety amin'ny tongotra
Iray amin'ireo singa fototra ho an'ny mpitaingina raha ny hitazomana ny fandanjana amin'ny soavaly. Singa ilaina amin'ny fiarovana ny mpitaingina azy, milatsaka aminy ny lanjany.
Noho izany, ny safidy ny arakaraka dia ilaina, ary koa ny toerana mety amin'ny tongotra. Andao hojerentsika kely ny momba azy rehetra!
Amin'ny taranja mitaingina rehetra, tongotra toerana dia tsy maintsy ho marina Mba hitazonana ny fandanjana dia misy singa ilaina ilaina eto: ny mixrup. Tsy maintsy mihosin-tongotra ianao ary mitondra ny fikororohana amin'ny tendron'ny tongotra.
Rehefa voalamina tsara ny fikororohana dia tonga amin'ny taolana misy ny kitrokely izy ary avelao hangataka malalaka amin'ny seza ny tongotra. Eto dia miditra an-tsehatra ny manamarina fa ny fihetsika izay mihantona ny mixrup dia manana halava mety ho an'ilay mitaingina azy.
Zava-dehibe iray tokony hikajiana amin'ny arisotra, dia Aza avela mihantona izy ireo raha tsy mandeha mitaingina fiara ianao, satria mety hanimba ilay soavaly izy ireo mamely azy na tratra zavatra. Ny mety indrindra dia ny lento mamatotra azy ireo amin'ny alàlan'ny fivezivezena ary hamindra ny hetsika eo anelanelany mba hiarovana azy ireo.
1 Ny fikorontanana rehefa mandeha ny fotoana
1.1 Ahoana no nipoiran'ny fikorontanana?
2.1 Fikororohana mahazatra na anglisy
2.2 Ny fiarovana
2.4 Karazana miolakolaka na tranom-borona
Ny fikorontanana rehefa mandeha ny fotoana
Nandritra ny taona maro, ny fikorontanana nivoatra tamin'ny endrika sy fitaovana izy ireo. Tonga amin'ny teboka izay ny mpitaingina fifaninanana, miaraka amin'ireo mpanamboatra lohalaharana amin'ny tsenan-tsoavaly, dia namolavola vokatra toerana nametrahan'izy ireo ny traikefany manokana sy manokana, nampitombo ny fiarovana, ny fiononana ary ny kalitaony.
Ahoana no nipoiran'ny fikorontanana?
Amin'ny fotoana sasany ao amin'ny Taonjato faha-XNUMX amin'ny androntsika, namboarina ary nanomboka nampiasaina tany Chine ny sasany tohana amin'ny tongotra izay hanamora ny fanohanan'ny mpitaingina azy amin'ny soavaly. Notanterahina izy ireo amin'ny vy natsipy ary ary ny sasany manao varahina ary mihantona amin'ny fehy.
Na izany aza, ny fikolokoloana taloha izay manana ny endrik'ilay loop dia fantatra ary misolo tena ny zavakanto India hatramin'ny taonjato XNUMX talohan'i JK. Ireto antecedents an'ny mixrup ireto dia mety ho malalaka ary toa zatra nitaingina ihany izy ireo, ary, etsy ankilany, ny hafa izay ny endriny sy ny solontenany dia milaza fa ny rantsan-tongotra ihany no nampidirina. Na izany aza, tsy fantatra mazava raha ireo singa aseho amin'ny sary taloha an'ny zavakanto indiana ireo, dia tena mpanelingelina.
Niitatra nandritra ny fotoana elaela ity zavatra noforonina ity. tezitra dia fahita tamin'ny taonjato faha-XNUMX teo amin'ireo olona aziatika sasany, indrindra ny avars, izay nanaparitaka izany.
Ny voalohany Ny fikororohana avarian dia faribolana boribory nopetahany ambany mba hanohanana tsara kokoa ny tongotra. Izy ireo koa dia nanana karazana lela voasarona eo an-tampony, izay niraikitra tamin'ilay fehy fampiatoana. Misy manam-pahaizana milaza izany tonga tany Andrefana ny fikorontanana avy eo an-tanan'ny Avars, rehefa ireo ao amin'ny Taonjato faha-XNUMX tonga tany amin'ny Fanjakana Byzantine izy ireo. Haingana ny Franks nanatevin-daharana nanampy an'ity sombin-tsoriny ity.
Betsaka ny olona no nankasitraka ny tombony azo avy amin'ny fampiasana ny mixeur. Ity singa ity, nanampy ny mpitaingina azy hifehezana bebe kokoa ilay biby mitaingina. Ankoatr'izay, tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny fitoniana ny mpitaingina azy, dia nanome a mazava kokoa noho ny fitifirana zana-tsipika avy amin'ny soavaly ary nanamora ny fampiasana sabatra na fitaovam-piadiana hafa. Noho izany, io fanorona io dia fanatsarana koa amin'ny ady.
Hatramin'ny taonjato fahasivy dia misy porofon'ny fisehoan'ny fikorontanana maro any Eropa.
Tsy azo atao ny manondro hoe iza avy ny mixrup no tsara kokoa satria ny tsiro tsirairay avy no nilalao. Raha afaka manome tolo-kevitra vitsivitsy momba izay heverintsika fa tokony hananana fikorontanana tsara isika.
Ny zava-dehibe rehefa misafidy aretin-tsaina dia izay manome tohana tanteraka amin'ny tongotra, ka tsy misy mihetsika mihitsy ka tsy tokony hiahiahy amin'ny toeran'ny tongotra marina ny mpitaingina ary hifantoka amin'ny mitaingina. Amin'ity lafiny ity dia Ny sakany voatondro dia 1cm eo ho eo amin'ny lafiny roa amin'ny tongotra. Miaraka amin'ny sisin-tsarimihetsika lehibe kokoa dia hiparitaka ny tongotra ary iray tery kokoa ny tongotra dia ho voafandrika raha sendra lavo, zavatra mampidi-doza tokoa ho an'ilay mitaingina azy.
Ho fanampin'izay, ny sakany dia tsy maintsy zahana fa ny vita amin'ny kodiarana tsara satria io singa io no hanakana ny tongotra tsy hidina. Fampahalalana iray lehibe hafa koa dia ny endriny dia manome antoka ny famotsorana ny tongotr'ilay mpitaingina raha misy ny fianjerany.
Ny antsipiriany mahaliana iray hafa dia ny fikorontanana manana lanja, manodidina ny 3 kg. ka raha sanatria votsotra izy ireo dia tsy hatsipy any amin'izay lalana rehetra toy ireo mikorontana izay kely lanja ihany. Ka afaka mitazona azy ireo mora kokoa ilay mpitaingina azy.
Andao hojerentsika izao ny karazana fikorontanana mety ho hitantsika:
Fikororohana mahazatra na anglisy
Izy ireo no be mpampiasa indrindra satria ny endriny dia mety amin'ny saika taranja rehetra, afa-tsy ny hazakazaka. Ny stirrup mahazatra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony izay mampiditra kitrokely fingotra.
Mividy - Tsy misy vokatra.
Ireo fantsom-panafody ireo dia mampiditra ny volavolany amin'ny kofehin-tongony mifatotra any ivelany ka raha sendra misy ny fianjerana dia avoaka haingana sy mora ny tongotr'ilay mpitaingina azy. Raha misy ny fianjera dia hiala io fehikibo io na hamoaka ny tongotra.
Mividy - Fihetsiketsehana fiarovana
Ny mampiavaka azy dia ny endriny izay mahatonga ny ombelahin-tongony ho ambany noho ny tendron'ny tongotra. Izany dia vokatry ny fivoahan'ny lalan-drivotra miala ao anatiny ary ny rantsan'ny fikorohana dia miroso mankany aloha.
Sampana tsotra na wavy aostralianina
Ny rantsana ivelany an'ny stirrup dia mikotrana, izany dia manakana ny tongotr'ilay mpitaingina tsy ho voafandrika raha misy fahalavoana.
Karazana miolakolaka na tranom-borona
Manana curvature na tranom-borona mandroso izy ireo. Ity karazan-panafody ity dia atolotra ho an'ireo izay mazoto mitafy ny sakoroka.
Mividy - Arisotra miolakolaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Stirrups: ny tantaran'izy ireo, iza no tokony hofidina sy ny toerana mety amin'ny tongotra
Fanatanjahan-tena hanamafisana ny hozatra amin'ny mitaingina soavaly
Ny soavaly divay: ny tantaran'izy ireo sy ny fety